भागरथी मृत्यु प्रकरण : सामूहिक बलात्कार की एकल ? « Ok Janata Newsportal
भागरथी मृत्यु प्रकरण : सामूहिक बलात्कार की एकल ?
काठमाडौं । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाकी १७ वर्षीया भागीरथी भट्टको मृत्युको कारणबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले बिहीबार चनाखो भएर उनको शव भेटिएको स्थानलाई घेरा हालेको थियो । घटनास्थलमा भएका प्रमाणहरु प्रहरीले सुरक्षित गरेको थियो ।
प्रहरीले भागीरथीको भेजाइलन स्वाबलाई परीक्षणका लागि पठाइएको छ । उनीमाथि बलात्कार भएको निष्कर्षमा पुगेको प्रहरीले सामूहिक बलात्कार थियो वा एकल भन्नेबारे स्वाब परीक्षणपछि आउनेछ । तालीम प्राप्त कुकुरसहित घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले अभियुक्त नजिक पुगेको बताइरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख डिआइजी उत्तमराज सुवेदी पनि घटनास्थलमा पुगेका छन् । घटनाको सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान भइरहेको सुवेदीको भनाइ छ । मोबाइल, फेसबुकको सहायता र भारतीय सीमकार्ड भएकोले भारतीय प्रहरीको पनि सहयोग मागिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
स्थानीयले अभियुक्तलाई छिटो सार्वजनिक गर्न दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरुले शव बुझ्न पनि मानेका छैनन् । पटक–पटकको बलात्कारपछि हत्याको घटनाले आजित बनेको प्रहरी र स्थानीयले हत्यारालाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।